टीकापुर थरुहट सम्मेलन : थरुहट प्रदेशका लागि आन्दोलनको प्रस्ताव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
टीकापुर थरुहट सम्मेलन : थरुहट प्रदेशका लागि आन्दोलनको प्रस्ताव
भाद्र ८, २०७६ ठाकुरसिंह थारु, गणेश चौधरी
टीकापुर — टीकापुरमा भइरहेको थरुहट/थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलनमा संविधान संशोधनसहित थरुहट प्रदेशका लागि फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने मुद्दा प्रस्ताव गरिएको छ ।
आइतबार सुरु भएको बन्दसत्रमा अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको प्रस्ताव गएिको हो । बन्दसत्रमा मुलुकभरीका एक हजार थारु अगुवाहरु सहभागी छन् । बन्दसत्रमा थरुहट प्रदेशका लागि आन्दोलनको विकल्प नभएकोमा एकमत देखिएका छन् ।
आन्दोलनका लागि आवश्यक पर्ने संगठनको नामाकरणका लागि पनि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यससँगै आन्दोलनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, आवश्यक पर्ने संगठन र आन्दोलनका चरणका बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
०७२ भदौ ७ गते थरुहट आन्दोलनका क्रममा एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको मृत्यु भएपछि थरुहट आन्दोलन सेलाएको थियो । उक्त दिनलाई थरुहट बिद्रोहका रुपमा मान्दै टीकापुरमा सम्मेलन गरिएको हो ।
थरुहट/थारुवान सम्मेलनको टिकापुरमा जारी बन्दसत्र । तस्बिर : ठाकुरसिंह थारु/कान्तिपुर
सम्मेलन तयारी संयोजक मीनराज चौधरीले थरुहट आन्दोलन, अबको बाटो र आन्दोलनका चरण बारे प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उनले पहिलो चरणमा थरुहट प्रदेशका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
दोस्रो चरणमा थारु बहुल क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण प्रर्दशन, आमसभा लगायतका कार्यक्रमहरु गरिने उनले बताए । तेस्रो चरणमा थरुहट बिरोधीहरुलाई सामाजिक बहिष्कारदेखि संघर्षका कार्यक्रम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उक्त प्रस्तावमा बन्दसत्रमा सहभागी थारु अगुवाहरुले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । बन्दसत्रले पास गरेको निर्णयका आधारमा थरुहट आन्दोलनको बाटो तय हुने आयोजकले जनाएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ११:५४
टीकापुरमा देशभरका थारु अगुवाहरुको भेला
टीकापुर घटनाको चार वर्ष
भाद्र ७, २०७६ ठाकुरसिंह थारु, गणेश चौधरी
टिकापुर — टीकापुरमा देशभरका थारु अगुवाहरु भेला भएका छन् । थारुवन प्रदेशको माग गर्दै जारी थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको टीकापुर घटनाको सम्झनामा देशभरीका थारु अगुवाहरु टिकापुरमा जम्मा भएका हुन् ।
थारु कल्याणकारिणी कार्यक्रम नाम दिइएको उक्त कार्यक्रममा सयौले सहभागीता जनाएका छन् । टीकापुरको सिटी हल र चौर खचाखच भरिएको छ । कार्यक्रममा सहभागी हुन मुलुकका विभिन्न क्षेत्रहरुबाट थारु समुदायले सहभागिता जनाएका छन् ।
कार्यक्रमलाई पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, राजपाका अध्यक्षमण्डलका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण, पूर्व राजदूत विजय कर्ण, वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल, लेखक खगेन्द्र संग्रौला, युग पाठकले सम्बोधन गर्दैछन् ।
कार्यक्रमस्थलमा कडा सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । सुरक्षाकर्मीहरुले सुरक्षा जाँच गरेरमात्रै कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश दिइरहेका छन् । आयोजकले १० हजार बढीको सहभागिता रहेको दाबी गरको छ ।
वक्ताहरुले टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी मानिएका निलम्बित राजपाका सांसद रेशम चौधरीलाई रिहाईको माग गरेका छन् । टीकापुर घटनामा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्षमण न्यौपाने, डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदसहित ८ को ज्यान गएको थियो ।
प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ १५:२१
थप १६६ जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या १ हजार ५६७
सत्तारुढ दलका प्रवक्ताको प्रश्न : सांसद विकास कोषलाई किन निरन्तरता दिइयो ?
आइसोलेसन नभएपछि एन्टिबडी पोजिटिभ देखिएकालाई भैंसीगोठमा राखियो
बजेट संशोधनका लागि तयार हुन अर्थमन्त्रीलाई सांसद चौधरीको आग्रह
बाजुराको आइसोलेसनमा मृत्यु भएकी २ वर्षीया बालिकालाई कोरोना पुष्टि
सबै सरकारी सेवामा योगदानमा आधारित पेन्सन
अपडेटः आइतबार, १८ जेठ, २०७७ । १५ : ४० बजे